Ingakanani ibuprofen ephephile ukuyithatha? - Imininingwane Yezidakamizwa | Septhemba 2021
Ezemidlalo Ezisindayo Izidakamizwa Vs. Umngani Imfundo Yezempilo, Ukuphila Kahle Inkampani, Ulwazi Lwezidakamizwa Ukuphila Kahle Inkampani, Imfundo Yezempilo Ezokuzijabulisa Imininingwane Yezidakamizwa, Imfundo Yezempilo Izilwane Ezifuywayo Imininingwane Yezidakamizwa Cindezela Imfundo Yezempilo, Izindaba Izindaba, Wellness Imfundo Yezempilo, Izilwane Ezifuywayo Imidlalo
Main >> Imininingwane Yezidakamizwa >> Ingakanani ibuprofen ephephile ukuyithatha?
Ingakanani ibuprofen ephephile ukuyithatha?
Uma wake wazelapha ekhaya ngenxa yekhanda noma ubuhlungu bemisipha, kungenzeka uthatheibuprofen. Eyaziwa ngamagama emikhiqizo ejwayelekile njenge I-Advil futhi UMotrin , ibuprofen yisidakamizwa esingelona i-steroidal anti-inflammatory (NSAID) eselapha izinhlungu nomkhuhlane omncane.
Yize i-ibuprofen enamandla amakhulu itholakala ngemithi kadokotela, abantu bavame ukuthola lo muthi e-the-counter bese bewusebenzisa lapho bekhetha. Okuvame ukuthathwa ngaphandle kokuqondiswa ngudokotela, kubalulekile ukuqinisekisa ukuthi usebenzisa isilinganiso esifanele se-ibuprofen, ikakhulukazi uma kuhilela izingane, wazi amandla okuhlangana kwezidakamizwa ezingezinhle, futhi wazi izimo lapho ukusetshenziswa kufanele kugwenywe noma kuphela ngokugadwa ngudokotela (izingane ezingaphansi kwezinyanga eziyisithupha ubudala futhi ezingafika eminyakeni emibili, nabesifazane abakhulelwe, ngokwesibonelo).
Ngokuvumelana ne izifundo zakamuva , i-ibuprofen yi-NSAID ejwayelekile kunazo zonke ethinteka ekuqedeni ngokweqile, ngokunyuka okuphawulekayo kokudlula ngokweqile kwe-ibuprofen ngemuva kokugunyazwa kwayo okuthe xaxa e-United Kingdom ngo-1984. Kodwa ukweqisa izidakamizwa ibuprofen kuyingozi futhi kuyabulala.
Sizochaza ukuthi ungaqiniseka kanjani ukuthi usebenzisa lesi sidakamizwa ngokuphepha ngokuqonda isilinganiso esifanele se-ibuprofen lapho welapha umkhuhlane nobuhlungu ezinganeni nakubantu abadala.
Amafomu we-Ibuprofen namandla
Ngaphambi kokuthola isilinganiso esifanele, kubalulekile ukuqonda izinhlobo ezahlukahlukene namandla e-ibuprofen (amakuponi ebuprofen) akhona. Lokhu kufaka phakathi:
Amaphilisi ayi-100 mg
Amaphilisi angama-200 mg
Amaphilisi angama-400 mg (Rx)
Amaphilisi angama-600 mg (Rx)
Amaphilisi angama-800 mg (Rx)
200 mg iphilisi
Ithebhulethi engu-100 mg engabhekwa
100 mg nge-5 mL ukumiswa ngomlomo (uketshezi)
50 mg nge-1.25 mL ukumiswa ngomlomo (uketshezi olugxilwe ezinganeni)
Izinhlobo ezithile zesilinganiso se-ibuprofen zingangcono kubantu abahlukile ngokuya ngesimo sabo esithile. Ngenxa yokuthi izingane zingaba nenkinga yokugwinya ithebhulethi yonke noma i-capsule, ithebhulethi engahlaziyeki noma ifomu eliwuketshezi le-ibuprofen (imininingwane yebuprofen) lingafanelekela kangcono izingane.
IBuprofen enamandla amakhulu idinga umuthi kadokotela futhi isetshenziswa yilabo abanezinhlungu ezinzima noma ukuvuvukala okubangelwa yisimo esithile. Izimo zezempilo eziphathwe ngemithi kadokotela-amandla ibuprofen zifaka i-dysmenorrhea (ukuya esikhathini okubuhlungu), i-osteoarthritis, nesifo samathambo. Kulezi zimo, akuyona into engavamile ukuthola incwadi ye-ibuprofen evela kudokotela wakho yokwelashwa kobuhlungu.
Ufuna intengo engcono kakhulu ku-Ibuprofen?
Bhalisela izaziso zamanani we-Ibuprofen bese uthola ukuthi intengo ishintsha nini!
Ishadi lokulinganisa le-Ibuprofen
Isilinganiso sanoma imuphi umuthi kufanele sinqunywe uchwepheshe wezokunakekelwa kwezempilo njengodokotela wakho noma usokhemisi. Izincomo zesilinganiso zingahluka ngeminyaka yesiguli, isisindo, umlando wezokwelapha, nohlu lwemithi yamanje.
Ithebula elingezansi linikeza izincomo zomthamo ojwayelekile kanye nemihlahlandlela ngokususelwa esimweni, ngokwe-U.S. National Library of Medicine (I-NLM). Imithamo icaciselwe ibuprofen ejwayelekile futhi ingahluka ngaphansi kwamagama emikhiqizo ehlukene yomuthi.
Isimo Kunconywe umthamo we-ibuprofen wabantu abadala Umthamo omkhulu wabantu abadala
Ukuphumula kobuhlungu I-200-400 mg ngomlomo njalo ngamahora we-4-6 njengoba kudingeka 1200 mg ngosuku (OTC)
3200 mg ngosuku (amandla kadokotela)
Imfiva I-200-400 mg ngomlomo njalo ngamahora we-4-6 njengoba kudingeka 1200 mg ngosuku
I-Dysmenorrhea (amajaqamba okuya esikhathini) I-200-400 mg ngomlomo njalo ngamahora we-4-6 njengoba kudingeka 1200 mg ngosuku (OTC)
yini ongayithatha ngezinhlungu ngenkathi ukhulelwe
I-arthritis (i-osteoarthritis ne-rheumatoid arthritis) I-1200-3200 mg ngomlomo ngosuku ngemithamo eminingana 3200 mg ngosuku
Ishadi lokulinganisa lezingane ibuprofen
Ithebula elingezansi linikeza imihlahlandlela yesilinganiso ejwayelekile ye-ibuprofen yezinhlungu nomkhuhlane ezinganeni, ngokusho kwe-NLM. Umthamo uyehluka kokubili ngesisindo sengane, njengoba kubhalwe ohlwini lokuqala, nefomu namandla we ibuprofen yezingane , njengoba kubonakala kumakholomu alandelayo.
Khumbula, umhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwempilo kufanele anqume isilinganiso sanoma imuphi umuthi, ikakhulukazi ezinganeni.
Isisindo sengane (amakhilogremu) Izinsana ziyawa (50 mg) Ukumiswa kuketshezi (100 mg) Amandla kaJunior amaphilisi angafuneki (100 mg) Amaphilisi abantu abadala (200 mg)
12-17 amakhilogremu 1.25 ml - - -
18-23 amakhilogremu 1.875 ml - - -
24-35 amakhilogremu 2.5 ml 5 ml noma 1 tsp 1 ithebhulethi -
36-47 amakhilogremu 3.75 ml 7.5 mL noma 1.5 tsp 1.5 amaphilisi -
48-59 amakhilogremu 5 ml 10 mL noma 2 tsp Amaphilisi ama-2 1 ithebhulethi
60-71 amakhilogremu - 12.5 ml noma 2.5 tsp Amaphilisi ama-2,5 1 ithebhulethi
72-95 amakhilogremu - 15 mL noma 3 tsp Amaphilisi ama-3 Amaphilisi 1-1.5
96+ lbs - 17.5-20 mL noma 4 tsp Amaphilisi 3.5-4 Amaphilisi ama-2
I-Ibuprofen akufanele isetshenziswe ezinganeni ezingaphansi kwezinyanga eziyisithupha ubudala ngaphandle kokuthi kuqondiswe udokotela wezingane wengane yakho. Imvamisa yokuphinda imithamo ebalwe ngenhla njalo ngamahora ayisithupha kuya kwayisishiyagalombili. Ukulinganisa imijovo yezilinganiso kunembe kakhulu kunezipuni zasendlini.
Izingozi zokuthathwa ngokweqile kwe-ibuprofen zixhomeke kumthamo, kuchaza uTaylor Graber, MD, ongudokotela obulala izinzwa e Ama-ASAP IVs eSan Diego, eCalifornia. Ngokweqile okukhulu, kungaba nezinkinga ezinkulu zesistimu yezinzwa ezifana nokuquleka (i-neurotoxicity), umfutho wegazi ophansi (i-hypotension), izinga lokushisa eliphansi (i-hypothermia), nezinye izinkinga ezinzima zomzimba. Lokhu akuvamile kakhulu kubantu abadala ngaphandle kokudlula ngokweqile ngamabomu.
Ukuthatha i-ibuprofen noma ezinye izinhlobo zama-NSAID kungaba nemiphumela emibi kakhulu njengengozi eyengeziwe yezimo ezinzima zenhliziyo nemithambo emathunjini njengokushaywa unhlangothi, isifo senhliziyo, ukwehluleka kwenhliziyo, isifo sezinso, ukopha, isilonda, nokugcwala kwesisu noma kwamathumbu. Le micimbi ingabulala, ngakho-ke kubalulekile ukwazi ukuthi ingakanani i-ibuprofen ephephile ukuyithatha ukugwema ubungozi bale miphumela emibi engafuneki. Ukugwema imiphumela emibi ye-ibuprofen, udokotela wakho angancoma iTylenol (acetaminophen) esikhundleni se- I-NSAID .
Omunye umphumela omkhulu obonwe ekusetshenzisweni kwesikhathi eside kwe-ibuprofen kungukuphazamiseka kokugeleza kwegazi lezinso, okungabonakala njengokulimala kwezinso okuncane nokuphakama kwe-creatinine, kepha kungaba namandla kakhulu uma lokhu kuphazamiseka kungavivinywa kusenesikhathi, kusho uDkt. Graber.
Imiphumela emibi ye-Ibuprofen
Ukuthatha ibuprofen eningi kakhulu kungadala imiphumela emibi ejwayelekile futhi, njenge:
Isilungulela noma isisu
Ukucasuka kwesisu (okungukuthi, ubuhlungu besisu, isicanucanu, ukuhlanza, isifo sohudo)
Ukugwema imiphumela engahle ibe khona yesikhashana noma yesikhathi eside yokuthatha ibuprofen eningi kakhulu, ungathathi ngaphezu komthamo wakho onconyiwe. Umthamo ophelele wansuku zonke wabantu abadala ngu-3200 mg. Ungathathi ngaphezu kuka-800 mg ngomthamo owodwa. Sebenzisa kuphela umthamo omncane kakhulu odingekayo ukunciphisa ukudumba, ubuhlungu, noma imfiva yakho.
Isisindo sengane sinquma isilinganiso se-ibuprofen sezingane. Qiniseka ukuthi ukala ngokucophelela imithamo futhi awuphathi ngaphezu komthamo onconywayo wesisindo sengane yakho. Uma unemibuzo mayelana nomthamo we-ibuprofen wakho noma wengane, xhumana nodokotela wakho noma usokhemisi.
Qaphela ngokucubungula izinto okufanele uzigweme ngenkathi uthatha ibuprofen. Ngokwesibonelo, ukuphuza utshwala ngenkathi uthatha ibuprofen kungaba yingozi njengoba kungandisa ingozi yokuphuma kwesisu. Ama-NSAID afana ne-ibuprofen nawo akufanele athathwe ngenkathi kukhiqizwa ubisi lwebele noma ngesikhathi sokukhulelwa, ikakhulukazi phakathi ne-trimester yesithathu, ngoba angashintsha umsebenzi we-prostaglandin futhi abangele izinkinga ngesikhathi sokukhula komntwana nokuzalwa.
ingabe isichibi sokulawula inzalo sibangela ukuzuza kwesisindo
I-Ibuprofen nayo ingaba nemiphumela emibi ngenxa yokuhlangana kwezidakamizwa ezithile ne:
IWarfarin (thola amakhuphoni eWarfarin | Imininingwane yeWarfarin)
IMethotrexate (thola amakhuphoni eMethotrexate | Imininingwane yeMethotrexate)
Ama-antihypertensives (ama-ACE inhibitors, ama-ARB, ama-beta blocker, ama-diuretics)
Ama-SSRIs / ama-SNRI
ILithium(thola amakhuphoni eLithium | Imininingwane yeLithium)
ICyclosporine(thola amakhuphoni we-Cyclosporine | Imininingwane ye-Cyclosporine)
* Ukuthatha ibuprofen kuhlangene ne-aspirin kungaba yingozi kakhulu uma uthatha i-aspirin ukuvimbela isifo sohlangothi noma isifo senhliziyo. I-Ibuprofen ingenza i-aspirin ingasebenzi kahle ekuvikeleni uhlelo lwakho lwe-cardiovascular.
Yize eminye yale miphumela emibi ibucayi kakhulu futhi iyabulala, kubalulekile ukukhumbula ukuthi lezi yizimo ezeqisayo zemiphumela engaba khona yokuthatha ibuprofen eningi kakhulu.
Ngokuvamile, ama-NSAID ajwayelekile futhi abekezeleleka kahle, futhi imiphumela emibi ayivamile ngokusetshenziswa okujwayelekile, kusho uDkt Graber.
I-Ibuprofen iyimithi ejwayelekile e-the-counter yokwelashwa okusebenzayo nokuphathwa kokuvuvukala, ubuhlungu, nomkhuhlane ezinganeni nakubantu abadala. Uma nje isetshenziswa ngokuziphendulela ngokusebenzisa isilinganiso esifanele kanye nezinkomba ezifanele, ibuprofen yindlela yokwelashwa evikelekile ngokuvamile.
Izinsizakusebenza zomthamo we-ibuprofen:
Kunconywe umthamo we-ibuprofen wabantu abadala
Amaconsi wezinsana ze-Ibuprofen
Ukumiswa ketshezi kwezingane ibuprofen
Amandla we-Ibuprofen junior amaphilisi angafuneki
Ama-Patches ama-5 Best CBD: Umhlahlandlela Wakho Wokuthenga Olula (2021)
Imiphumela emibi ye-Cialis nokuthi ungakugwema kanjani
yini i-singulair esetshenziselwa ukwelapha?
mangaki amaphilisi we-mucinex dm ukuze anyuke
Ngidinga incwadi kadokotela ye-chantix
ungasho kanjani ukuthi angibekezeleli i-lactose
iyogathi yokutheleleka ngemvubelo ukusebenzisa isikhathi esingakanani